I-GetWeb - insiza yabathengi
Thola iwebhu yabathengi
Ingxenyekazi Yedijithali Yemikhiqizo Nemisebenzi
Ukonga - Ukunikezwa - Ama-Promotions - Izikhangiso - Izindaba nokuningi
ITrovaWeb yabathengi yiphuzu lokuhlangana langempela lokuthenga.
Inethiwekhi enkulu ye internet kunokunikezwa okuningi kwemikhiqizo nezinsizakalo abathengi abangangena kuzo ngesivinini esikhulu ricerca ukulandela izinjini noma ezisekelweni ezinikezelwe. Kodwa-ke, ezimweni eziningi ukulethwa kukhulu kangangokuba kungasakazeka futhi kudide abathengi.
I-TrovaWeb yadalwa ukuhlinzeka ngokuhleleka kuzinxushunxushu zokunikezwa kwe umsebenzi online kanye nezinqubo ezisebenzayo zokusiza abasebenzisi ukuthola abakufunayo.
Izinzuzo Zabathengi ziyabonakala: okokuqala, ukuthenga ngezimo ezizwakalayo zomnotho ngenkathi ukonga imali ngokuqinisekile kuyinzuzo enkulu.
Abasebenzisi be Isifunda se-GetWeb kanye neyakhe Izingxenye eziyi-12 ezihlanganisiwe bangahlala basebenzisela inzuzo ukukhushulwa nokunikelwayo kokubuka kuqala, phakathi kwabo bonke abaphakanyisiwe ibhizinisi amalungu eSekethe.
Konke abathengi abangakuthola kumaPortal ethu
Il Thola Umjikelezo Wokushicilela Okuku-Inthanethi yindawo ebonakalayo ethuthukisa futhi egqugquzela umthetho obabazekayo obabazekayo ibhizinisi, izakhiwo kanye izinkampani. Ngakho-ke iqinisekisa izinhlobo eziningi zemikhiqizo nezinsizakalo zokubukwa ngemininingwane uqobo lwayo kwesitolo.
Lokho abasebenzisi bethu abakuthola ku-inthanethi yethu
Abaklami, abakhandi begolide, abapheki, ama-physiotherapists, abadwebi, abalimi, onjiniyela, ababazi. Kusese: osomabhizinisi, Abafundisi, abameli, Abezemidlalo, Ochwepheshe bezokwakha nabasebenza ngogesi. Ngamafuphi, bonke bethu bakhona ezingosini zethu ochwepheshe futhi i izingcweti abakhuthele kokukodwa umkhakha ochwepheshe
Izindawo zokudlela, ama-Law Firms, Ama-Gyms, Izitolo zokudla, imihlangano yokusebenzela, ezitolo zezincwadi, imigoqo yewayini, imisila, amabhikawozi, izinkampani zokwakha, amahhovisi olungisa izivumelwano, ama-stationeries, izitolo zeqhwa, abathengisi, abalungisa izinwele, abagibeli, ubucwebe, izithombeni zezithombe nabanye abaningi izinkampani ilungele ukukunikeza ngezinsizakalo zabo.
Ihhotela, Amahhotela, Impesheni, Residence, Indawo yokulala nokulala kwasekuseni nakho konke Indawo yokuhlala ebekelwe ukwamukela, ukuhlala nokuhlala ubusuku bonke.
ITrovaWeb ingeyabo BONKE - I-TrovaWeb ingeyabo BONKE